IMicrosoft ithi Windows 10 ayifuni nayiphi na intsholongwane Iindaba zeGajethi
IMicrosoft ithi Windows 10 ayifuni nayiphi na intsholongwane
UIgnacio Sala | | Iikhompyuter, software
Izicelo zokuthintela izixhobo zethu ukuba zingosulelwa yintsholongwane bezikunye nathi ukusukela kwiminyaka yoo-90s, nangona oko kungabangela umonakalo namhlanje ikude lee kunasekuqaleni. Njengoko itekhnoloji iguqukile, iintsholongwane ziye zazala abantwana ngohlobo lwe-malware, ispyware, kunye nokunye.
Ukuba ne-antivirus bekusoloko kuyinto eyimfuneko kubo bonke abasebenzisi kwaye kuphela kwabakhaliphileyo, abangena kwi-Intanethi ngaphandle kokhuseleko Windows Defender yeza kwintengiso ngesandla Windows 8, ekubeni ukhuseleko kwi-malware eyakhelwe ngaphakathi kwinkqubo, kodwa yayineentsilelo ezininzi. Ngokukhutshwa kwe Windows 10, Windows Defender watshintsha igama layo.
Okwangoku, iZiko loKhuseleko lweWindows lijongana nokulawula zonke iifayile ze- umngcipheko onokubangela naluphi na uhlobo lomonakalo kwizixhobo zethu Ngelixa sikhuphela iifayile kwi-Intanethi, sijonga iimeyile zethu, sityelela iphepha lewebhu ... Kodwa ayilogama elichazayo lale nkqubo yokhuseleko ehlanganiswe nayo Windows 10, ukusukela ekwindla lalo nyaka, izakubizwa Khu seleko lwe Windows.
Ngale ndlela, imfihlo evulekileyo iyangqinwa, ukuba Windows 10 idibanisa i-antivirus yendalo esikhusela njengayo nayiphi na intsholongwane Okwangoku ifumaneka kwintengiso, ethi inkampani iqhayise emva kovavanyo yi-AV-TEST, iziko elizimeleyo lobuchwephesha be-IT.
Ngokwolu vavanyo, Windows Defender yafumana awona manqaku aphezulu anokubakho kuvavanyo olwenziwe yi-AV-TEST enxulumene nokhuselo, ukongeza ekuqaqambiseni ngakumbi kwinani leempembelelo zobuxoki, enye yeengxaki eziphambili ebesoloko sijamelene ne-antivirus. Kuvavanyo lwentsebenzo, enye yeengxaki ezinkulu zeenkqubo ze-antivirus, njengoko bekulindelwe kwaye zidityaniswa kwinkqubo, iWindows Defender ifumene amanqaku ama-5 kwayi-6.
Ukuba i-antivirus yakho sele iza kuphelelwa lixesha, inokuba njalo hayi umbono ombi kakhulu thembela intsholongwane yesiqhelo enikezelwa yiWindows 1st.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » IMicrosoft ithi Windows 10 ayifuni nayiphi na intsholongwane
Uhlalutyo lweXiaomi Mi Mix 2S, irhamncwa likaXiaomi ukuzama ukulawula kuluhlu oluphezulu
IVivo Y83: ene «Notch», neMediaTek Helio P22 kunye nee-euro ezingama-200